နေအိမ်» PCB- သတင်း» ၂၀၂၀ တွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပီစီတပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာအသုံးချမှုများသည်အဘယ်နည်း။
2020-05-08 အပေါ် Posted
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆားကစ်ဘုတ်တပ်ဆင်သူများ၏လမ်းညွှန် - pcb နှင့် pcba အကြားအခြေခံကွာခြားချက်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PCB တပ်ဆင် အခြားမည်သည့်အီလက်ထရောနစ်ပရိသကဲ့သို့အရေးကြီးပါသည်။ သင်၏နေ့စဉ်အသက်တာတွင်အသုံးပြုသော gadget အားလုံးသို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းအားလုံးနီးပါးတွင်အခြေခံကျသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိသည်ကိုသင်သိပါသလား။ မည်သည့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းမဆို
သင်၏ PC လက်တော့ပ်
သူတို့က PCB တပ်ဆင်မှုမရှိပဲစနစ်တကျအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဒါကြောင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PCB ပရိဘောဂဆိုတာဘာလဲ။
On the other hand, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ pcb စည်းဝေးပွဲကို is also known as the process of soldering. And assembling electronic components on circuit boards and finished / assembled circuit boards. Furthermore, circuit board assembly manufacturer usually use various electronic equipment. Similarly, the completed PCBA is actually used for electronic devices rather than PCBs.
Components Stability is closely related to the functions of terminal products and manufacturing costs. Mastering the above-mentioned overall conditions is the advantage of the development of the ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ pcb စည်းဝေးပွဲကို .
The sustainability challenges faced by ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ pcb စည်းဝေးပွဲကို and medical device manufacturers are not limited to technology. But also requireacommitment to reliable PCB production, superior functionality and adaptation to strict medical standards.
The medical market has also pointed out. How to make the ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ pcb စည်းဝေးပွဲကို compact, versatile, user-friendly and cost-effective fiercely competitive.
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ pcb စည်းဝေးပွဲကို is the best way to get customers’ unique specifications.
To improve people’s operation rate and quality of life, high durability ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ pcb စည်းဝေးပွဲကို has become the main focus. In addition to this, medical device manufacturers have felt the attractive growth of active implants.
ဤရည်ရွယ်ချက်အရ၎င်းတို့သည်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများ၊ ပုံစံများ၊ အရွယ်အစားများ၊ ၎င်းတို့အနက်အချို့သည်တစ်ဖက်သတ် PCBs၊ HDI သည်တွင်းများမှဖုံးအုပ်ထားခြင်းမရှိဘဲနှစ်ဖက်သာရှိသည့် PCB များဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Ultra HDI ဆားကစ်ဘုတ်များ၊ အလွှာသုံး PCBs၊ တင်းတင်း / ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် PCBs နှင့် Semi- ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် PCBs ။
Importance of research in ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ pcb စည်းဝေးပွဲကို
ဆေးဝါးစျေးကွက်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည်။ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်းကြာရှည်ခံမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်စမ်းသပ်နည်းလမ်းများတွင်ညွှန်ပြနေကြသည် အနာဂတ် PCB ရှေ့ပြေးပုံစံ ။
အလိုအလျောက် optical ရှာဖွေရေး,
In addition to innovative test methods, research is going global to eradicate dangerous viruses. one of which is the covid19. Therefore, the ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ pcb စည်းဝေးပွဲကို is ahead of the world’s leading markets. And there will be substantial growth every other day.
PCB isavery close and dear part of our contemporary life. Although we still do not notice it. For decades, the technology of effectively ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ pcb စည်းဝေးပွဲကို and installing components has rapidly developed intoafast-to-point structure. In addition, each has its own advantages and disadvantages. Making them ideal for certain tasks rather than others.